45s Sajid Javid: &#39;Chero mufundisi anozviremekedza&#39; airamba zvaMP images and subtitles
Chave chiri rukudzo rukuru kushandira seanodzikisira we exchequer uye, nepo ini ndaifara kwazvo kuti mutungamiriri yakada kundinyudza, ini ndakanga ndisingakwanise kugamuchira mamiriro acho izvo zvaakabatanidza. Saka ndainzwa kunge ndakasiiwa ndisina imwe sarudzo kunze kwekungosiya chigaro. Zvino, mutsivi wangu ane rutsigiro rwangu rwizere uye prime minister anoenderera mberi kunakidzwa nerutsigiro rwangu rwizere, sezvinoita hurumende. Mamiriro akange akasungirirwa aive chinhu chandinoda kutsiva vapi vezano vangu vezvematongerwo enyika. Iwe unoziva, ava vanhu vakashanda zvakaoma kwazvo nekuda, kwete hurumende chete, asi nyika yese, waita basa rakanaka. Ini ndakanga ndisingakwanise kugamuchira iwo mamiriro. Handitende kuti chero mushumiri anozviremekedza angagamuchira mamiriro akadai uye saka, saka, ini ndainzwa kuti chinhu chakanyanya kunaka kuita kuenda.
Sajid Javid: &#39;Chero mufundisi anozviremekedza&#39; airamba zvaMP
< start="0.48" dur="3.26"> Chave chiri rukudzo rukuru kushandira seanodzikisira we exchequer >
< start="3.74" dur="2.28"> uye, nepo ini ndaifara kwazvo kuti mutungamiriri >
< start="6.039" dur="3.621"> yakada kundinyudza, ini ndakanga ndisingakwanise kugamuchira mamiriro acho >
< start="9.66" dur="1.28"> izvo zvaakabatanidza. >
< start="10.94" dur="3.159"> Saka ndainzwa kunge ndakasiiwa ndisina imwe sarudzo kunze kwekungosiya chigaro. >
< start="14.46" dur="4.02"> Zvino, mutsivi wangu ane rutsigiro rwangu rwizere uye prime minister anoenderera mberi >
< start="18.48" dur="2.1"> kunakidzwa nerutsigiro rwangu rwizere, sezvinoita hurumende. >
< start="21.44" dur="3.9"> Mamiriro akange akasungirirwa aive chinhu chandinoda kutsiva >
< start="25.349" dur="1.43"> vapi vezano vangu vezvematongerwo enyika. >
< start="26.779" dur="3.051"> Iwe unoziva, ava vanhu vakashanda zvakaoma kwazvo >
< start="29.83" dur="2.08"> nekuda, kwete hurumende chete, asi nyika yese, >
< start="31.91" dur="1.03"> waita basa rakanaka. >
< start="33.38" dur="2.24"> Ini ndakanga ndisingakwanise kugamuchira iwo mamiriro. >
< start="35.87" dur="3.53"> Handitende kuti chero mushumiri anozviremekedza angagamuchira mamiriro akadai >
< start="39.41" dur="3.25"> uye saka, saka, ini ndainzwa kuti chinhu chakanyanya kunaka kuita kuenda. >